Sajhasawal.com.np | Homeओलम्पिकमा भीडभाड कम गर्न एयर्पोर्टबाटै उड्ने ट्याक्सीमार्फत खेल मैदान पुर्याउने तयारी
नेकपा समाप्त हुने डा.बाबुरामको टिप्पणी
कामको सिलसिलामा कर्मचारीको मृत्यु भएमा १० लाख पाउने, बहु विवाह गरेमा पेन्सन नपाउने
राज्य व्यवस्था समितिले गर्यो यस्तो निर्णय,निजामती कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष
मन्त्री थापाले गरिन प्रजनन अधिकारमा समर्थन जनाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह
सल्यानमा जीप दुर्घटना हुदाँ दुई जनाको मृत्यु, आठ घाइते
सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुने महासंघको पुनः प्रतिबद्धता
चितवनबाट २ थान पेस्तोल सहित दुईजना पक्राउ
त्रिभुवन विश्वविद्यालय डिन कार्यालय नजिकै एक युवाको बेवारिसे शव फेला
के हो बालबालिकामा देखिने बेग्लै खालको मानसिक समस्या ‘मुड स्विङ’ ? उपचार के छ ?
आज सुनको मूल्य तोलामा ६ सयले बढ्यो, कति पुग्यो ? हेर्नुहोस
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले १९ प्रतिशत लाभांश दिने
नेपाल लाइफ इन्स्योरन्सको आय २८.८६ प्रतिशतले वृद्धी
‘शून्य लागत कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्न आग्रह’
बहराइनमा नेपाली श्रमिकको माग उच्च, श्रम सम्झौता परिमार्जन गर्न तयार
भर्ना प्रक्रिया स्वच्छ तथा न्यायमा पहुँच हुन नसक्दा आप्रवासी कामदारको मानवअधिकार जोखिममा
श्रममन्त्री विष्टद्वारा शून्य लागत कार्यान्वयमा भूमिका खेल्न आइओएमलाई आग्रह
आप्रवासी कामदारको अन्तर्राष्टिय सम्मेलन सुरु, श्रमिकका समस्या सम्बोधन गरिँदै
ओलम्पिकमा भीडभाड कम गर्न एयर्पोर्टबाटै उड्ने ट्याक्सीमार्फत खेल मैदान पुर्याउने तयारी
Posted on: 30 Jun, 2019
असार १५, काठमाडौँ (एजेन्सी) | पेरिसस्थित फ्रान्सेली सरकारले २०२४ मा हुने ओलम्पिक खेलहरूको लागि तयारी सुरु गरेको छ । पेरिस प्रशासनले सडकमा बाक्लो ट्राफिक नियन्त्रण र स्टेडियमको सुरक्षाको लागि योजना बनाउने काम सुरु गरेको हो । अधिकारिहरुको अनुसार, ओलम्पिकको समयमा त्यहाँ पेरिसको सडकमा धेरै भीड हुने हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न उड्ने ट्याक्सीको सहायता लिने योजना बनाइएको हो । योजना अनुसार विदेशबाट आउने पर्यटकहरूलाई बिमानस्थलबाटै प्रत्यक्ष खेलकुदको क्षेत्रसम्म उड्ने ट्याक्सीको मद्धतले ढुवानी गरिनेछ ।
अहिले, साधारण रुपमा पेरिसको बिमानस्थल चार्ल्स डे गले एयरपोर्टबाट बस वा रेलबाट शहरको मुख्य भागमा पुग्न एक घण्टा लाग्छ । यदि एयरबस, एरपोरेटस डे पेरिस (एडीपी) कम्पनी र स्थानीय ट्राफिक एडमिनिस्ट्रेशन RATP को योजना सफल भएमा ट्याक्सी मार्फत यात्रीहरु ओसार्ने काम सुरु गरिनेछ ।
यसहप्ता पेरिस स्थित एक एयर शो मार्फत एयरबस र यसको ठाडो उडान र अवतरण (VTOL)मेसिनहरू सार्वजनिक गरियो । पेरिसको आकासमा सफलतापूर्वक एकपटक परीक्षण भएपछि तिनीहरू चाँडै यात्रुहरूको लागि परीक्षण गरिनेछ । एडीपी कम्पनीको कार्यकारी निर्देशक एडवर्ड आर्के्राइटको अनुसार, आगामी ५ देखि १० वर्षमा विश्वको जनशंख्या तीब्र बढ्नेछ । यस अवस्थामा, यात्रुहरुले आफ्नो सेवाको लागि उड्उने ट्याक्सी उपभोग गर्न सक्नेछन् ।
यस्तो ट्याक्सी अवतरण गर्नको लागि ADP कम्पनीलाई एक वर्षको समय दिईएको छ । साथै, १८ महिनामा आधारभूत संरचनाको लागि लगानी गर्न थप योजना बनाइएको छ, ताकि १० वायु-वातावरण अकूलल हुने विमान पेरिस क्षेत्रमा हवाई ट्याक्सीको रुपमा काम गरुन । सुरुमा यस परियोजनामा १ करोड यूरो लगानी गरिनेछ । प्रशासनले हरेक पर्यटकहरूलाई हरेक छ मिनेटमा उड्ने ट्याक्सी सुविधा प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ।
जति बच्चा जन्मायो उतिनै पुरस्कार, ७ बच्चा जन्माउने महिलालाई स्वर्ण पदक !
यस्तो छ,सुन र हिराबाट बनेको ट्वाइलेट
ज्यूँदै मान्छेहरुको समेत अन्त्येष्टि गरिन्छ जहाँ